Kushambadzira Cloud: Maitiro ekugadzira otomatiki muOtomatiki Studio kupinza maSMS Contacts muMobileConnect | Martech Zone
Kambani yedu ichangobva kuita Salesforce Marketing Cloud kumutengi anga aine gumi nemaviri akabatanidzwa aive neshanduko dzakaoma uye mitemo yekutaurirana. Pamudzi paive nea Shopify Uyezve base with Recharge Subscriptions, mhinduro yakakurumbira uye inochinjika yekunyorera-yakavakirwa e-commerce zvinopihwa.
Iyo kambani ine hunyanzvi hwekuita kutumira mameseji uko vatengi vaigona kugadzirisa kunyoreswa kwavo kuburikidza nemeseji meseji (SMS) uye vaifanira kutamisa nharembozha dzavo kuenda kuMobileConnect. Zvinyorwa zvekupinza nharembozha muMobileConnect ndeidzi:
Gadzira tsananguro yekupinza mukati Bata Muvaki.
Gadzira otomatiki mukati Automation Studio.
Wedzera an import chiitiko kune otomatiki.
Paunogadzirisa chiitiko chekupinza, sarudza iyo import tsanangudzo wakasika.
Chirongwa uye activate otomatiki.
Izvi zvinonzwika sezviri nyore nhanho-nhanho shanu, handiti? Chokwadi ndechekuti zvakatonyanya kuoma saka tafunga kuzvinyora nekugovanisa pano.
Yakadzama Matanho eKuita otomatiki Kupinza kweKushambadza Kwako Cloud Mobile Contacts MuMobileConnect Uchishandisa otomatiki Studio
Danho rekutanga kugadzira tsananguro yako yekutumira muBata Builder. Heino kupatsanurwa kwematanho ekuita izvi.
Gadzira tsananguro yekupinza mukati Bata Muvaki nokutsvaga sika bhatani muBata Muvaki> Zvinotengwa kunze.
sarudza List seyako Target Destination mhando yeimprot yaunoda kuita.
sarudza Import Source. Takasarudza kuunza kubva kune zvenguva pfupi Data Extension iyo yakarongedzerwa nedata.
Nguva iripo Sarudza List uye Sarudza Rondedzero Yako (Munyaya yedu, All Contacts - Nharembozha).
Ava vanobatika vese vakasarudza-kupinda uye isu tiri kuvaendesa kuMobileConnect, saka unofanirwa Kubvuma Opt-In Certification Policy.
Mepu Yako Yekupinza Rondedzero Columns (isu takagadzira iyo Data Extension nehukama hweContactKey hwakatosimbiswa).
Zita chiitiko chako uye sarudza chako SMS Kodhi uye SMS Keyword.
Simbisa wizard uye tinya pedza kuchengetedza chiitiko chako chitsva. Iva nechokwadi chekuwedzera email kero yako yezviziviso kuitira kuti iwe ugoziviswa nguva yega yega iyo yekutumira ichiitwa pamwe nemhedzisiro.
Tsanangudzo yako yekutumira ikozvino yachengetwa uye unogona kuinongedzera mune yako Automation yauchazogadzira mairi Automation Studio.
Matanho ekugadzira otomatiki mukati Automation Studio hazvina kunyatsojeka. Usashandise iyo Faira Kupinza Chiitiko. Tsvaga iyo SMS Chiitiko kwaunogona kuwedzera chiitiko uchishandisa iyo Ngenisa SMS Yekuita Chiitiko.
Wedzera an import chiitiko kune otomatiki nekusarudza tsananguro yekutumira yawakagadzira mudanho rechisere pamusoro. Iwe unozofanirwa kuwedzera iyo SMS folda kwauchaona wako import tsanangudzo.
Chirongwa uye activate otomatiki. Kana otomatiki yako ichimhanya, nharembozha dzako dzinozounzwa kunze uye iwe unozoziviswa kune email kero padanho rechisere.
Kana muchida rubatsiro musazeze kutibata pa Highbridge. Takaita zvakakura zvekushandisa uye kutama kubva kune mamwe mafoni ekushambadzira mapuratifomu kuenda kuMobile Cloud.
Tags: otomatiki studiocontact buildercontact keygadzira tsananguro yekunzedata kuwedzerakugadzira mepuimport tsanangudzoimport listimport mobile listpinza vanyoreri venharepinza sms kuonana chiitikokushambadzira goremobile contactsmobile studiomobileconnectopt-in certification policyrechargerecharge subscriptionssalesforcesfmcShopify UyezveSMSsms kodhisms keywordkwainovavarirwa
Manash ane makore anopfuura makumi matatu echiitiko mukugadzira, kuyera, uye kubatanidza software semhinduro sevhisi. Semubatsiri uye mubatsiri pa Highbridge, Manash ane basa rekuongorora nekuvandudza mutengi wavo uye tarenda rekuvandudza remukati, kuisa pamberi nekuita otomatiki mhinduro, uye kugadzira yakaoma, inokonzeresa kusanganisa.